Golaha Amaanka oo dib u cusbooneysiiyey qaraarka la dagaalanka burcadbadeeda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Golaha Amaanka oo dib u cusbooneysiiyey qaraarka la dagaalanka burcadbadeeda
Golaha Amaanka oo dib u cusbooneysiiyey qaraarka la dagaalanka burcadbadeeda
December 1, 2009 - By: Hanad Askar
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa dib u cusbooneysiiyey qararka ogolaanaya la dagaalanka burcad badeeda Soomaalida, waxayna uga digeen bulshada caalamka in ay bixiyaan wax madaxfurasho ah, si loo siidaayo markaaiibta iyo dadka laga qabsadey.
15 ka dawladood ee xubnaha ka ah Golaha Amaanka ayaa isku raacey in la meelmariyo dheereynta qaraarka lanbarkiisu yahay1897 ee la dagaalanka burcadbadeeda, arintan ayaa daba joogtey kadib markii todobaadkii la soo dhaafey burcadbadeed Soomaaliyeed ay gacanta ku dhigeen Markab watey calanka dalka Giriiga kaas oo saliid u sidey dalka Maraykanka.
Qararaaka lanbarkiisu yahay 1897 ayaa u ogolaanaya in wadamada caalamku ay u diri karaan biyaha dalka Soomaaliya maraakiibta dagaalka iyo diyaarado, qaraarka ayaa shaqeyn doona tan iyo 30 bisha Nofeember ee 2010, waxaana heshiiskan saxiixay dawladda uu madaxweynaha ka yahay Shiikh Shariif.
Qaraarka ayaa sidoo kale ogolaanaya in ay hawlgalo ka fulin karaan gudaha Soomaaliya si loo joojiyo burcadbadeeda.
Sidoo kale qaraarka ayaa ugu baaqaya wadamada daneeya la dagaalanka burcadbadeeda in ay la yimaadaan heshiis ay ku mideysan yihiin kaas oo ah wadanka lagu xiraayo burcadbadeeda, marka la so qatbo.
Labadii sano ee u danbeeyay waxaa sare u kacay weerarka burcadbadeedu ay ku hayaan markaaibta ku goosheysa gacanka Cadmeed iyo badweynta Hindiya.
Burcadbadeeda ayaa u arka in ay yihiin kuwo ilaaliya kheyraadka badaha Soomaaliya taas oo maraakiibta ajaanibtu ay ku hayaan faro ba’an, sidoo kale waxaa ay sheegtaan in ay ka waardiyeeyaan Markaaiibta wadamada horumaray in ay ku daadiyaan sunta wershadaha Biyaha Soomaaliya.